चट्याङ् के हो ? कसरी जोगिने ? – www.janabato.com
Latest Taja-update TOP STORIES विविध
चट्याङ् के हो ? कसरी जोगिने ?
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १६:१२ June 10, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
-एजेन्सी/ के हो चटयाङ ? चटयाङ ‘बादल र बादल’ वा ‘बादल र जमिन’ बीच बग्ने एक प्रकारको विद्युतीय करेन्ट हो । पृथ्वीको सतहबाट जलवाष्प माथि आकाशमा पुगेपछि शून्यभन्दा तल्लो तापक्रममा बरफमा परिणत भएका पानीको कणबीच घर्षण हुँदा विद्युतीय ‘चार्ज’ उत्पन्न हुन्छ ।
यसपछि विपरीत जार्च भएका कणहरू एकअर्काबाट पृथक हुन थाल्छन् र आकाशमा विद्युतीय क्षेत्र तयार हुन्छ । यो विद्युतीय क्षेत्रले स्थिरताका लागि सजिलो बाटो खोज्छ । बादलमा धेरै ठूलो चार्ज उत्पन्न भएपछि यसले पृथ्वीको सतहमा भएको सुचालक खोज्न थाल्ने औंल्याउँदै भौतिक शास्त्री एवं चटयाङमै विद्यावारिधि गरेका श्रीराम शर्मा भन्छन्, ‘र, पृथ्वीको सतहमा भएको, ठूलो टावर, रूख, घर, पाइप वा कुनै व्यक्ति चटयाङको सिकार बन्छ ।’ एउटा चटयाङमा सूर्यको सतहभन्दा पाँच गुणा बढीसम्म तापक्रम हुन सक्छ । अर्थात्, यो तापक्रम २७ हजार डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन सक्छ । एउटा चटयाङमा बादलबाट जमिनतिर चार्ज बग्दा एक अर्ब भोल्टसम्मको विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ ।
बिजुली चम्केको देखे तपाईं बाँच्नुभयो यदि तपाईंले चटयाङको चमक देख्नुभयो भने नआत्तिनुस्, तपाईं जोगिनुभयो । प्रकाशको गति करिब ३ लाख किलोमिटर प्रतिसेकेन्ड हुन्छ भने ध्वनिलाई १ किलोमिटर टाढा पुग्न करिब ३ सेकेन्ड लाग्छ । यसैले बिजुली चम्केको देखियो भन्नुको तात्पर्य तपाईं यसबाट अप्रभावित रहनु हो ।
अपराह्न ४ बजेदेखि ६ बजेबीच सर्वाधिक चटयाङ मुलुकमा सामान्यत: अपराह्न ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म सबैभन्दा बढी चटयाङ पर्ने गरेको छ । यस्तै, पूर्वी नेपालको झापामा सबैभन्दा बढी चटयाङ पर्ने गरेको पाइन्छ ।
यसबाहेक पूर्वी नेपालको चुरे पर्वत शृंखला सुरु हुने ठाउँदेखि नवलपरासीसम्मको खण्ड चटयाङबाट बढी प्रभावित क्षेत्र रहेको शर्मा बताउँछन् । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा समेत यसको अधिकतम प्रभाव देखिएको छ ।
यसबाहेक त्रिशूली नदी क्षेत्र, पोखरा, विराटनगर, सिन्धुपाल्चोक विशेष प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन्
उपचार चटयाङ प्रभावितलाई समय खेर नफाली तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याउनुपर्छ । चटयाङको विद्युतको मानव शरीरमा थुप्रै गुणा नकारात्मक असर हुन्छ । चटयाङले शरीर डढा तन्तुहरूमा क्षति पुग्नुका साथै यो नष्टसमेत हुन सक्छ । यसलाई सहजै निको पार्न सकिँदैन ।
शरीरमा भएको रगत लिएर जाने ससाना नलीहरूसमेत चटयाङको प्रभावले फुट्न सक्छन् । चटयाङको असर हाम्रो स्नायु प्रणालीमा समेत पर्छ । यसले गर्दा हृदयाघात भएरसमेत मृत्यु हुन सक्छ ।
त्यति मात्र नभई शारीरिक अपंगताको जोखिमसमेत हुन्छ ।
नाडीको चाल हेर्न सबैभन्दा राम्रो स्थान गर्दनमा भएको धमनी छाम्नुपर्छ । श्वास र नाडीको चाल नदेखिए स्वास्थ्य सहयोग नआएसम्मका लागि कार्डियोपल्मुनरी रेसिस्युटेसन (सीपीआर) गर्न थाल्नुपर्छ ।
एक्कासि मुटुको चाल रोकिँदा सीपीआर धेरै प्रभावकारी हुन्छ । घाइतेको सास बन्द रहे तुरुन्त मुखका माध्यमले मुखमा दिइने कृत्रिम श्वासप्रश्वास प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । घाइते चिसो र भिजेको ठाउँमा रहे हाइपोथर्मियाबाट जोगाउन प्रभावीलाई बाक्लो तन्नालगायतका कुनै वस्तुमा राख्नुपर्छ ।
चार वर्षअघि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा चटयाङ प्रभावित नुवाकोटकी १० वर्षे बालिका ल्याइएको घटना सम्झँदै डा. ओममूर्ति भन्छन्, ‘चटयाङ प्रभावित ती नानीको शरीर कतै डढेको थिएन तर मुटु अत्यन्त कमजोर
भएर श्वासप्रश्वासको समस्याले गर्दा अस्पताल ल्याइएको थियो ।’
मुटुको क्रियाकलापमा सुधार ल्याउन विभिन्न औषधिलगायत सामान्य प्रक्रियापछि ती बालिका पूरै निको भएर घर फर्किएकी जनाउँदै डा. ओममूर्ति भन्छन्, ‘चटयाङ प्रभावितको मुटुको उपचार
नगर्दा विस्तारै मुटुको क्रियाकलाप बिग्रेर मृत्युसमेत हुन सक्छ ।’ चटयाङ प्रभावित व्यक्तिको स्वास्थ्य संस्थामा ईसीजी र इको अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । चटयाङ प्रभावितको मुटु परीक्षण आवश्यक छ । चटयाङ परेका बेला कसरी जोगिने ?
फुस, पक्की वा जस्तोसुकै घरमा चटयाङको सुचालक (लाइटनिङ कन्डक्टर) लगाउनुपर्छ । जमिनमा रहँदा असुरक्षित अग्लो वस्तुको मुनि, छेउछाउमा बस्नु हुँदैन । अग्लो रूख, बाँसको झाङलगायतको मुनि र खुल्ला ठाउँमा बस्नु हुन्न ।
हाइटेन्सन लाइनको नजिक भए दुइटा ठूलो टावरबीच तारमुनि बस्दा हुन्छ । घरभित्र हुँदा रेडियो, टेलिभिजन, इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि बन्द राख्नुपर्छ ।तार जोडिएको फोन (ल्यान्ड लाइन) उपयोग गर्नु हुँदैन । यसबाट मृत्युसमेत भएको छ । खुला धारामा नुहाउनु हुँदैन । सकेसम्म विद्युतीय उपकरणभन्दा टाढै बस्नुपर्छ । चटयाङ परिरहेका बेला रेडियो, टीभी, कम्प्युटर, सबैको मोडेम र पावर प्लग निकाल्नुपर्छ । झयालढोकाबाट अलि टाढा बस्नुपर्छ ।नांगा खुट्टाले भुइँमा टेक्नु हुँदैन । पछिल्लोपटक चटयाङको आवाज सुनेको आधा घण्टासम्म बाहिर निस्कनु हुँदैन ।
← बाल विकासका शिक्षकहरुको प्रदेश भेला सम्पन्न
ताजा तरकारी भन्दा बासी तरकारीमा बिषादीको मात्रा कम →
पावर सेयरिङ मिल्यो दलहरुवीच, कसलाई कुन पद ?
१३ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०९:४७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on पावर सेयरिङ मिल्यो दलहरुवीच, कसलाई कुन पद ?
ठूलो लुम्पेकमा खेलकुद प्रतियोगिता सुरु
१८ आश्विन २०७४, बुधबार ०९:४६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on ठूलो लुम्पेकमा खेलकुद प्रतियोगिता सुरु